चिनियाँ जहाजको घाँडो | गृहपृष्ठ
Home सम्पादकीय चिनियाँ जहाजको घाँडो
सम्पादकीय 376 views
चिनियाँ जहाजको घाँडो
नेपाल र चीन सरकारबीच ५ वर्षअघि दुईओटा अनुदान र चारओटा सहुलियतपूर्ण ऋणमा जहाज ल्याउने सम्झौताअनुसार हार्विन एयरक्राफ्टले निर्माण गरेका वाई–१२ सिरिजका अन्तिम २ जहाज काठमाडौं उत्रिएका छन् । १७ सीट क्षमताका ९एन–एक्यू र ९एन–एकेभी कलसाइन जहाज दुर्गम क्षेत्रका साँघुरो धावनमार्गमा समेत उडान गर्न मिल्ने हुँदा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोगी हुनेमा दुईमत छैन । तर, यसअघि नै ल्याइएका जहाज पाइलटको अभावमा उडान गर्न नसकिएको निगमले बताउँदै आएको छ । त्यो समस्या समाधान नगरी बाँकी जहाज ल्याउन हतारो गर्न निगमलाई केले बाध्य ग¥यो त्यो बाहिर आउनु जरुरी छ ।
जहाज अभावका कारण आन्तरिक तथा बाह्य उडान गर्न नपाएको निगमले अहिले जहाज भएर पनि उडान गर्न नसक्नु दुःखलाग्दो विषय हो । पहिलोपटक जहाज ल्याउँदा नै उडानसम्बन्धी समस्या देखिएको थियो । अङ्ग्रेजी भाषा बुझ्ने चिनियाँ पाइलट र स्पेयर पार्टस् तथा मर्मतको व्यवस्थाका लागि नेपालले चिनियाँ पक्षसँग आग्रह पनि गरेको थियो । त्यो आग्रह सम्बोधन नभई थप जहाज ल्याउनु नै हुँदैनथ्यो ।
चीनसँग जहाज ल्याउने सम्झौता गर्नु नेपालका लागि आर्थिक रूपले फाइदा नै होला । चीन नेपालको उत्तरी छिमेक भएको हुँदा सम्बन्ध सुधारमा पनि त्यस्तो सम्झौता निकै उपलब्धिमूलक मान्नुपर्छ । तर, चिनियाँ कम्पनीबाट उत्पादित जहाज उडानमा पर्ने समस्याले जहाज थन्क्याएर राख्नुपर्ने अवस्था आउनु राम्रो होइन । चीनसँगको डिलिङमा हुने समस्या भनेको नै यही हो । पहिलो कुरा त चिनियाँहरू नेपाललाई व्यापारिक क्षेत्र नै ठान्दैनन् । तर पनि उनीहरूले नेपालसँगको सम्बन्धलाई भने महत्त्व दिइरहेकै हुन्छन् र निकै ठूलो सहयोग पनि दिइरहेका पनि छन् । यसको अर्थ नेपालले जहाजका सम्बन्धमा चीनसँग डिल गर्न नै जानेन भन्ने हुन्छ ।
चिनियाँ कम्पनीबाट उत्पादित जहाज उडानमा पर्ने समस्याले जहाज थन्क्याएर राख्नुपर्ने अवस्था आउनु राम्रो होइन ।
सम्झौता भएलगत्तै दुईओटा र करीब १ वर्षअघि दुईओटा जहाज आए । तर, ती जहाजले पनि पुरानै समस्याका कारण पूर्णरूपमा उडान गर्न सकेका छैनन् । अब फेरि थप जहाज आए भनेर खुशी हुने अवस्था रहेन । आफूसँग भएका जहाज उडाउने क्षमता नभईकन अरू जहाज ल्याउन हतारो गर्नु नै हुँदैनथ्यो । सम्बन्धित पक्षलाई अवगत गराइसकेको समस्या समाधान नभई थप जहाज ल्याउँदा निगमलाई पर्न गएको घाटा कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने विषयमा निगम सञ्चालकले सोच्नुपर्ने हो ।
हार्विन एयरक्राफ्टले निर्माण गरेका जहाज नेपालमा मात्र सञ्चालनमा आउन लागेको भने होइन । यो कम्पनीका जहाजलाई अमेरिकाले पनि उडान गर्ने अनुमति दिइसकेको छ । चीनका धेरै हवाई कम्पनीका साथै मलेशिया, इरान, पाकिस्तान, श्रीलङ्कालगायत देशले यो कम्पनीका जहाज प्रयोग गरिरहेको विकिपिडियामा उल्लेख छ । त्यस हिसाबले यो कम्पनीका हवाई जहाज ठीकै होलान् । तर, नेपालले पहिलोपटक दुई जहाज भित्र्याएताका नै यूरोपले नेपालको हवाई सुरक्षामाथि नै प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसको भित्री कारण अरू भए पनि एउटा कारणचाहिँ हार्विन एयरक्राफ्टसँग जहाज किन्नुलाई मानिँदै आएको छ ।
हवाई जहाज मात्र होइन, कुनै पनि कम्पनीका नयाँ सामान किन्दा क्रेताले त्यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने बारेमा विक्रेतासँग सिक्ने शर्त राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यो शर्त नराखी सामान किन्दा यस्तै समस्या हुन्छ । भित्रिइसकेको जहाज सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था नगरी थप जहाज ल्याएर त्यो जहाज किन्दा लागेको ऋणको भार मात्र बेहोर्नुपर्ने अवस्था अहिले छ । ती जहाज किन्न ६ अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ अनुदान तथा सहुलियत ऋणमा निगमलाई एक्जिम बैङ्कमार्फत ऋण उपलब्ध गराइएको छ । उडानका लागि ल्याइएका जहाज त्यसै बसिरहने हो भने त्यो ऋण कसरी तिर्ने ?
खिम्ति, भोटेकोशीलगायत जलविद्युत् आयोजनाबाट डलरमा बिजुली किन्नुपर्दा विद्युत् प्राधिकारणलाई ठूलो घाटा भएको भनेर विभिन्न क्षेत्रबाट हल्लीखल्ली गर्ने गरिएको छ । तर, हवाई जहाज ल्याउँदा भएको यत्रो लगानीका बारेमा किन कोही पनि गम्भीर हुन नसकेको होला ? बुझ्न नसकिएको विषयचाहिँ यही हो ।
१४ बैशाख २०७५, शुक्रबार ११:१९